Dutch pastry uye confectionery | Absolut Kufamba
Daniel | 15/04/2021 12:20 | Yakagadziridzwa ku 15/04/2021 13:21 | Holland
La gastronomy yeNetherlands haina mukurumbira uye tsika dzeimwe nyika dzeEurope dzakadai seFrance, Spain kana Italy. Pane kudaro, iyo Dutch pastry inozivikanwa zvikuru pasi rose. MaDutch anozvitsanangura sezino risingapindike zino rinotapira iro rinonakirwa nekubika uye kusevha mhando dzese dzemadhizeti nemaswiti.
Usati waenderera mberi, heino yambiro: yanhasi posvo izere nezvinonaka uye nemiedzo. Hazvikurudzirwe kuti urambe uchiverenga kune avo vari pane chikafu:
1 Maswiti ekare echiDutch
1.1 Zoute donhwe
2 ChiDutch Krisimasi pastry
2.1 Saint Nicholas makuki
Maswiti ekare echiDutch
Iyo liquorice inotapira yakanyanya kudyiwa muHolland, asiwo muBelgium, Luxembourg uye zvimwe zvikamu zveGerman. Iyo zoute kudonha ("Munyu donhwe") inotengeswa mune diki, dema machubhu. Chitarisiko chayo chakafanana neicho chema gummies uye kunaka kwayo kwakanyanya kufanana neya licorice. Kune mhando ina dzakasiyana zvichienderana neuwandu hwemunyu urimo.
Iyo inozivikanwa yeDutch liquorice, zoute kudonha
MaDutch anoti zvimwe zvekurapa zoute donhwe, kunyangwe ivo vachizvidya nekuti vanozvida. Mune mamwe mabheka anotengeswa akasanganiswa necoconut essence, mint, huchi, bay leaf uye zvimwe zvinwiwa.
Izvi ndizvo yakashata, caramelized vhezheni yechinyakare yeBelgian waffle (muchiDutch, stroop zvinoreva sirasi uye wafel zvakachinja). Iyi dhizeti inogadzirirwa mune yakakosha pani yakakamurwa kuita mativi. Iyo bundu inotemwa nenzira yekudururira iyo caramel mukati painenge ichigadzirwa.
Stroopwafel - vhezheni yeaya anozivikanwa ane waffle-akaita waffles
Munzvimbo zhinji vakagadzirirwa nekuwedzera nzungu dzakapwanyika nechitsiko, nepo kune vamwe mukanyiwa wakarungwa nesinamoni. Mhedzisiro yacho inogara ichishamisa.
Iyo yakakurumbira vlaai Iri keke rinotapira rakagadzirwa nembiriso mukanyiwa unozadzwa nemichero (apuro, apurikoti, chinanazi, puramu kana michero). Mune mamwe maDutch pastry mapepa, zvimwe zvinoshandiswa senge custard kana rhubarb zvinosanganisirwa.
Kune mamwe akasarudzika akasarudzika etsika vlaai. Mupunga mumwe, semuenzaniso, uzere nemupunga nekirimu, kunyangwe paine vamwe vakarova kirimu kana chokoreti.
Kufamba uchidzika nemugwagwa upi noupi mutaundi ripi neripi kana guta muNetherlands, zvakajairika kuti mhino dzedu dzinyengerwe nekunhuwirira kusingadzivisiki kwepoffertjes. Munyika yese mune zvidiki zvemigwagwa uko izvi zvidiki zvakagadzirirwa panguva ino mapancake anopisa ane yakanyunguduka mafuta uye neshuga yeupfu.
Poffertjes: Dutch mini-mapani
Zvakare mumaresitoreti echiDutch, poffertjes anotengeswa seinonaka svumbunuro yekuperekedza kofi kana tii. Iko kune kunyange zvitoro zvine hunyanzvi mune ichi chigadzirwa, chinonzi poffertjeskraam.
ChiDutch Krisimasi pastry
Madhishi eDutch anonyanya kusiana pakatarisana nenguva yeKisimusi. Zviitiko zvakakosha zvinodaidzwa kunhuwirira kwakakosha. Iyo Navidad muNetherlands inotanga kupembererwa musi waZvita 6, zuva raSanta Nicholas (Sinterklaas).
Saint Nicholas makuki
Pazuva rekuuya kwaSanta Nicholas nezvipo zvavo, vana vechiDutch vanotapira kumirira nekumwa chokoreti inopisa uye nekudya makuki. Vakuru vanoita zvakafanana, kunyangwe vaine girazi redoro muruoko.
Pepernoten weSanta Nicholas Day
Piet, mutevedzeri waSaint Nicholas, ndiye anoona nezvekugovera zvihwitsi pakati pevadiki. pepernoten (zvidiki zvisina kujairika zvakaumbwa makuki zvakagadzirwa ne rye, uchi uye anise) uye kruidnoten Tsangamidzi. Iyo zvakare inogovera zvikamu zve bendekete, puff pastry yakazadzwa nealmond paste.
Sezvo mune mamwe matunhu epasi rose, Zuva reKisimusi muNetherlands rinopembererwa nemhuri uye vakakomberedza tafura yakazara zvakanaka. Mabiko anoguma ne kststol, chibereko chemazambiringa echingwa icho chinowanzo zadzwa zvakare neamondi peamondi. Iyi keke, yakasarudzika nzira muDutch pastry, yakafanana neiyo yakagadzirirwa kuGerman nedzimwe nyika dzeCentral Europe.
Iyo cherry pamabiko eKisimusi muNetherlands: iyo kerststol
Mune dzimwe dzimba dzechitendero vanofarira kutsiva kerststol kune imwe dhizeti yakakosha: beschuit akasangana muisjes, chiDutch chipanje keke rakafukidzwa neshuga anise. Iko kudakadza uko kupemberera kuberekwa kwaJesu uye kuti nekuwedzera kunopihwawo kupemberera chero kuberekwa mukati megore rose.
PaEvha Idzva Idzva, kunhuhwirira kwemafuta kubva kune akadzika mafraya anouya kubva kukicheni kwakajairika mudzimba dzeDutch. Izvo zvinonaka zvakakangwa mukati mazvo oliebollen, hupfu fritters iyo inoshumirwa yega neshuga yakasaswa kana kuzadzwa nezvidimbu zveapuro nemazambiringa akaomeswa.
Iyo inotapira yakanyanya kunaka kutanga gore: iyo Oliebollen
Kune mamwe marudzi ematunhu eOliebollen (dudziro: "mafuta emabhanzi"). Munharaunda yeLimburg, semuenzaniso, ivo vakaumbwa semadonati uye vakagadzirirawo kupemberera Carnival. Kune rimwe divi, kumatunhu ekuchamhembe aya mafirita akagadzirirwa nehunyanzvi uye anonyanya kutenderedzwa, anenge akatenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Dutch pastry uye confectionery
ERIK WLDEMAR MUTENGI akadaro
NDINODA NZIRA YERUFONI YEDUTCH COTEPQUE
Pindura kuna ERIK WLDEMAR CUSTODIAN